Hidio foana ny ladoany dia mivoaka ny lisitry ny mpangalatra bolabola – MyDago.com aime Madagascar
Hidio foana ny ladoany dia mivoaka ny lisitry ny mpangalatra bolabola
Toy izao indray ny tatitry ny kabary heno tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka tamin’ity androany ity :
Feno (association) : isan’ny olona marobe nanatrika ny famerenana ny fitsarana 07 febroary tany Anosy aho ary nahatsapa fa rehefa mandray fitenenana na ny voaheloka na ny mpisolo vava dia tsy misy mihaino fa na manoratroratra na miresaka na mijery plafond ny fitsarana, tsapa fa efa misy didy tapaka any fa tsy maintsy mody eo fotsiny.
Kabary tsy valiana ny anao ry jeneraly Richard fa matoa ianao mahazo ireny dia tsy mety ny ataonao.
Raha fifidianana karakarain’ny FAT mpanongam-panjakana dia tsy handray anjara ny ankolafy 3 sy ny vahoakany ary inona ihany koa ny fifidianana hatao anatin’ny tsy fandriampahalemanana? Zaran’ny sasany aza mba tafiditra ho tompon’andraikitra hazahoana indemnité. Tandremo fa ny hetra alohanao dia hamatsiana ireo milisy manenjika sy mampijaly vahoaka.
Pst Edouard :hoavy hanome baomba sy basy kilalao ho anareo FAT ny rodobe sy ny ankolafy 3 satria hatao hamorana ianareo fa mbola tsy matotra ara-politika. Milaza azy ho be mokondoha fotsiny. Mbola vao bip sy mesazy dia katahotra, aiza izany rehefa antson’Andriamanitra ? Tsy membrany CT iray irery no nandripaka ny bolabola eran’i Madagasikara ary ao anatiny i Andry Rajoelina ankoatra ny zavata vitany taloha. Aiza ho aiza ianareo milaza fa mpitsara sy mpitandron’ny filaminana amin’izao toe-draharaha izao ? Tsy hivoakan’ny krizy i Madagasikara raha tsy majanka ny marina.
Manoela : efa nanantena isika fa hisy ministra na olona ambony voasambotra tamin’ny resaka bolabola. Iray ihany anefa. Nilaza ianareo fa nanao fanazaran-tena rehefa tonga ny SADC, sms fotsiny anefa dia efa raiki-tahotra, kolonely ara-dalana ianao fa tsy jeneraly.
Raha mbola Rajoelina no eo, tsy hisy fifidianana vanona ary izaho mino fa ho alefa amin’ny sefo fokontany ny rihatra atsy ho atsy.
Raha sitrapon’Andriamanitra dia amin’ ity volana jolay ity Ravalomanana no mody satria Windhoek sy Sandton no rafitra ary hanangana saina isika amin’io andro io.
Guy Maxime : rehefa tsy hita intsony ny atao dia mamorona dia misambotra olona amin’ny alalan’ny sms.
Misy miaramila Tia Tanindrazana mivory tsy tapaka hamerina ny hasin’ny tafika ary ny hangatahana amin’nyizy ireo dia ny ampitambatra ny mpanao politika ary tsy hanaiky ny raha tsy mivaha ny olana, tsy hisy kosa ny ady na ny ra latsaka.
95% ny any ny faritra dia mahatsapa fa voafitaka ary maniry ny firaisana miresaka. Fusible iny CT tratra tamin’ny andramena iny. Aza manao ratsy ihany : tratra tamin’ny pesage, tsy zakan’ny « lagrue » ireo containers ka teo no hita fa nanao fausse déclaration. Efa tamin’ny herintaona i Rajoelina no nilaza fa hamoaka ny lisitra ny olona mpanao trafika bolabola ka iny Ezekely iny ve ilay lisitra ? Aiza ireo lehibeny ? Hidio foana ny ladoany dia mivoaka ny lisitra.
Windhoeksy Sandton ihany no raisiny ny any ivelany ka manakaiky ilay TSAR.
Marcel :ireny famelambelarana toy ny tany Itaosy ireny no ilainy ny vahoaka tsytonga eto isan’andro.
Efa mazava ny any SADCsy UA fa diaWindhoeksy Sandton ka manakaiky izany ny fodin’ireo filoha. Aoka ny FAT hiomana amin’ny fifidianany any fa ny antsika ny fodian’ireo filoha. Matoa izy manao effet d’annonce fifidianana indray dia tsy nahomby ny tarigetran’i Simao ary nandamoka ny any Ratsirahonana.
Tsy tafa any amin’nyfaritra ihany koa ny fiche de recensement fa ny mahaliana azy dia daty fodin’ireo filoha.
Jeanson :niova ho fepetra ilay fangatahana hoe mody i Ravalomanana amin’ny fodian’i Jeanson avy any Ambositra io fa dia ho event tokoa.
NY T hivadika T: LISITRY NY FIKAKIANA 13 mai
Ny vola ihany, ny vola foana no mahafatifaty azy ireo !
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 juillet 2011 11 juillet 2011 Catégories Politique
8 réflexions sur « Hidio foana ny ladoany dia mivoaka ny lisitry ny mpangalatra bolabola »
12 juillet 2011 à 3 h 26 min
Efa mazava be ny resaka e!
Manarak’izany, dia miangavy mafy anareo ao amin’ny ladoany izahay MBA HANAMAFY NY TOLONA ataonareo fa tena any aminareo koa ny lakilen’ny fahafantarana ny zavadratsy ataon’ireo FATn’alika ireo!… Aza mety ho voavidin’ny vola mihitsy ianareo satria ny VONINAHITRAREO no potika toy ny an’ireo mpomba ny HATay ireo raha vao miditra amin’izany ianareo!
Mahatoky anareo izahay vahoaka!
12 juillet 2011 à 5 h 41 min
Sahia mijoro sy manao dingana lehibe! hoy i Dada. Amen.
12 juillet 2011 à 5 h 50 min
Dia ny mpiasan’ny ladoany aza leiretsy refa mba mahita fa tsy mety dia mijoro fa aiza ireto Miaramila ireto fa dia hihinam-bolam-bahoaka fotsiny ve fa avela @ zao fahoriana sy fijaliana izao ny vahoaka mamelona azy???
RaFITO dit :
12 juillet 2011 à 8 h 04 min
Fa tsy mitovy ihany v ny olana miseho @ zao sy ny teo aloha e, tsy mahagaga anie zany e tsy nilaozana corruption foana anie tao @ douane e, et alors !!! Tena sahy milaza v ny douane oe MASINA BE enga anie? ARY MIALA TSINY AMINAO AHO RY DADA RAVALO FA KELY TSY MISY DIKANY AKORY NY VITANAO MIHOTRA NY VITAN ‘I MÔPERA PEDRO, IRENY KA ATAO HOE OLON ANDRIAMANITRA MITSINJO NY MADINIKA,FA TSY LAOZANA VARIANA MANISA MILLIARD SY MIVAROTRA TANY MIDADASIKA @ DAEWOO SY NY MARO TSY TAMBY ISAINA ARY NAREO HAT OKIZAY FA TSY MAHAVITA AZY FA MOKONAZY.
May angaha ny endim-boanjon’i RaFITO ?
Dia iza indray no tian-dRaFITO hitondra ny Firenena ? Ny menasofina, sa i Pedro izay mihaina amin’ny vola avy any amin’ny menasofina ?
12 juillet 2011 à 9 h 43 min
Raha resaka FANDRAVANA aloha dia marina ny voalazanao ry RAFITO!
Dadanay mbola tsy naniraka olona handroba sy hamono na hanao MASIKITA
ny GASY toy ny nataon’i Pedro,olona avy eny ANdralanitra koa nandray anjara mavitrika t@’ireny
DIa nahavita lalana firy Km i PEDRO izay mitonon-tena ,miariary ny nafenina ,tsy navelan’nyMASINA
tsy hipoitra ny marina izao,MISY ANTONY IZY MATOA MANOHANA IO FANJAKANA TSY ARA-DALANA
IO!ary tsy takona hafenina intsony izany izao,na dia mody adala eo aza ianao ry RAFITO.
Miala any indray ny ex- foza !voadakan’i domelina angaha???mbola aiza no hanaovan’i domelina anareo???
vita ny nilany anareo! efa ritra ny bois de rose!dia i dadanay no hanalana vokony an!Mbay tany fa efa LO!
Nataon’i domelina nitsako tsy misy angaha???nampanantenainy METRO !TGV! vary 500 a ny Kg SNS hi!hi!hi!!!!!!!
12 juillet 2011 à 10 h 04 min
F’angaha rehefa tsy nakany apaosin’i RAFITO ilay milliardn’i Dadanay dia malahelo be!
tsy niarahanareo nisasatra ireny fa HATSEMBOHAN’I TAVANY NO NAHAMpanana AZY!
sy napandrosony ny firenena tao anatin’ny FOTOANA FOHY MONJA!
Firy taona i dada no nitondra ?dia firy taona i Pedro no teto?dia hapitovio ny zava-bita???Dada mbola tsy nampiasa
zaza tsy ampy taona fa nampidiriny an-tsekoly daholo ny zaza MALAGASY.
Resaka tany DAEWOO io foana no hialana olana f’angaha heverinao fa donto ohatra anao daholo ny olona ka mbola
hivarotanao saka be loha eto.
12 juillet 2011 à 23 h 13 min
Merci KM et Ranavalona,
Domabe ilay rafito tsy mentra manoratroratra fatany
Précédent Article précédent : Sary sy video Ankolafy Ravalomanana, 11 Jolay 11
Suivant Article suivant : Tano mafy ny finoanao !